လယ်သမားကြီးရဲ့ လောဂျစ် (Logic)
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ အာဏာစပြီးယူတော့ အိတ်ရှုးအမျိူးမျိူးပေါ်ထွက်လာတယ်။ လယ်မြေကိစ္စ၊ လက်ပံတောင်းတောင်ကိစ္စနဲ့ မြေသိမ်း၊ ယာသိမ်းကိစ္စတွေက စလို့ များပြားလှတဲ့ အိတ်ရှူးတွေကို လူတိုင်းတွေ့ နေရတယ်။
ပြည်သူတွေကလည်း စိတ်မချမ်းသာသလို ၊ အစိုးရကလည်း ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်နေတာကို သတိထားမိတယ်။
အခုနောက်ဆုံးပေါ်လာတဲ့အိတ်ရှူးကတော့ မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းက နွားရူးရောဂါ (Mad Cow Disease) တွေ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ နွားဆိုတာက မြန်မာလယ်သမားတွေအတွက် အထူးအရေးကြီးတဲ့ အရာဖြစ်တယ်။ နွားတွေသေကုန်ရင် လယ်သမားတွေ ထမင်းငတ်မှာဆိုတော့ မီဒီယာသမားတွေကလည်း အရမ်းကို စိုးရိမ်ပါတယ်။
ပွင့်လင်းစ မြန်မာပြည်မှာ မိုးဦးကျ ဂဏန်းတွေထွက်သလို ထက်မြတ်လှတဲ့ မီဒီယာသမားတွေလည်း အလျှိူလျှိူ ပေါ်ထွက်လာတယ်။ ဒီအထဲမှာ အမျိူးသမီးသတင်းထောက်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်မေသင်္ကြန်ဟိန်းလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ စာပေအရေးအသား သတင်းတင်ပြပုံ နဲ့ အင်တာဗျူးတဲ့စနစ်တွေကိုလည်း ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် နိုင်နင်းတဲ့ အမျိူးသမီးသတင်းထောက်ဖြစ်ပါတယ်။
သူမလည်း လက်ရှိ မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းက နွားရှူးရောဂါ ဘာ့ကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာကို မီဒီယာသမားပီပီ တိုင်းပြည်အတွက် စိတ်ပူလို့ လယ်သမားကြီးတွေနဲ့ အင်တာဗျူးပါတယ်။ မြစ်မခ မီဒီယာအတွက်ပါ။ ဒီအင်တာဗျူးကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဒေါ်မေသင်္ကြန်ဟိန်း။ ။ အခုဖြစ်နေတဲ့နွားရူးရောဂါဘာ့ကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ ပြီးတော့ ဦးလေးကြီးရဲ့ သီအိုရီနဲ့ အမြင်ကို ပြောပေးပါ။
လယ်သမားကြီးက ဒေါ်မေသင်္ကြန်ဟိန်းရဲ့ မျက်နှာကိုသေသေချာချာ စိုက်ကြည့်ပြီး....
နွားတွေက တနှစ်မှာ တစ်ခါပဲ သားပေါက်တယ်ဆိုတာကို ဆရာမကြီးသိလား....လို့ သတင်းထောက်ကို ပြန်မေးပါတယ်။
ဒေါ်မေသင်္ကြန်ဟိန်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ (မျက်နှာနီရဲလျှက်)။ သိပါတယ် ဦးလေး။ ဒါပေမဲ့ ကျမသိချင်တာက နွားရှူးရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားပုံနဲ့ ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုဖြစ်တာလဲဆိုိတဲ့ သတင်းအချက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။
လယ်သမားကြီး။ ။ နွားမကို တစ်ရက်မှာ နှစ်ခါ နို့ ညှစ်တာကိုကောသိလား...ဆရာမ ဒေါ်မေသင်္ကြန်ဟိန်း။
ဒေါ်မေသင်္ကြန်းဟိန်း။ ။ ဒါအရမ်းကို တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချက်အလက်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျမမေးတဲ့ ပွိုင့်ကိုမရောက်သေးလို့ ဖြေပေးပါအုံး။
လယ်သမားကြီး။ ။ အခု ခင်ဗျားပြောတဲ့ ပွိုင့်ကိုဖြေပါ့မယ်။ ခင်ဗျား စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဒေါ်မေသင်္ကြန်ဟိန်းရဲ့ နို့ (Tits )ကို တစ်ရက်နှစ်ခါညှစ်ပြီး၊ တနှစ်မှာ တစ်ခါ မိတ်လိုက်(Screwing) မယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားမရူးပဲနေပါ့မလား။
ယခုအင်တာဗျူးကို မြစ်မခ မီဒီယာမှာ ဘယ်တုန်းကမှ ဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိပါ။
A farmer logic အားမှီငြမ်းသည်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Sunday, October 14, 2012
ဒီနှစ်မှာ ၀မ်းသာစရာသတင်းတွေကိုလည်းတွေ့ ရသလို့ ဝမ်းနည်းရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကို တွေ့ ရပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒေါ်စုတို့ ပြေလည်းပြီး သင့်မြတ်နေတာက ၀မ်းသာစရာပါ။ ဒိထက်ပိုပြီး ၀မ်းသာစရာကောင်းတာက မြန်မာနိုင်ငံဟာ ချမ်းသာလာဖို့ လမ်းကို စတင်နေလို့ ပါပဲ။
လောကမှာ အကောင်းနဲ့ အဆိုး၊ အပြုနဲ့ အဖျက်က တွန့် တွဲနေတာ သဘာဝဆိုပေမဲ့....ဆိုးနေတဲ့ကိစ္စတွေကို အကောင်းဖြစ်အောင်ပြုပြင်လို့ လွယ်ပါတယ်။ အဖျက်သမားကို အပြုသမားဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ဖို့ မခဲယဉ်ပါဘူး။
အစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံ အသံညီနေပေမဲ့ အောက်ခြေက ၀န်ထမ်းတွေဟာ အဖျက်သလားလို့ တောင်မေးရမလိုပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ဦးအောင်မင်းပြောတဲ့ သူတို့ အစိုးရအဖွဲ့ ထဲ နောက်ကြောင်းပြန်သွားမဲ့ လူတွေရှိနေတယ်လို့ ပြောတာဖြစ်မယ်။ ကျနော်ပြောချင်တဲ့ အဖျက်သမားနဲ့ အဆိုးဆုံးဖြစ်နေတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကို ခင်ဗျားတို့ လည်း သတိထားမိမှာပါ။ ဒါကတော့ မုံရွာ ကြေးနီစီမံကိန်းက ငိုရှိုက်သံတွေနဲ့ မြေတွေ၊ အိမ်တွေကို ဘူဒိုဇာနဲ့ ထိုးပြီး ဖယ်ရှားနေတဲ့အရာတွေပါ။
ဒီမြင်ကွင်းတွေက မီဒီယာပွင့်လင်းလာလို့ မြင်နေရပေမဲ့ မီဒီယာသမားတွေလက်လှမ်းမမှီတဲ့နေရာတွေလည်း အများကြီးကျန်ပါသေးတယ်။
တကယ်တမ်းဆိုရင် မုံရွာကြေးနီစီမံကိန်းကို သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်းပြီး ဒေသခံတွေရဲ့ အသံတွေကို နားထောင်သင့်တယ်။ အခုတော့ မိုင်းမန်နေဂျာကပဲ ပြောတာတော့ သဘာဝလုံးဝ မကြပါဘူး။ သူကပဲ ဒေသခံတွေနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ညှိနှိုင်းမယ်။ စီမံကိန်းကိုတောင် မရပ်နိုင်ဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လိုတော့ မိုင်းက နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုလို့ ဆိုပြီး ဆင်ခြေပေးပါတယ်။ သူပြောတာကလည်း မှန်တယ်။ မိုင်းကနေ ၀င်ငွေရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မုံရွာဒေသခံတွေပိုင်တဲ့ မြေနေရာမှာတူးတာအပြင် သူတို့ ရဲ့ ဘိုးဘွာပိုင်မြေတွေကနေ အဝေးကိုတောင် ဖယ်ပေးရတာကို စာနာမှု့ မရှိ ပြောတဲ့စကားကတော့ သဘာဝလုံးဝမကြပါဘူး။ အကယ်၍သာ မိုင်းမန်နေဂျာလုပ်တဲ့သူက မုံရွာဒေသခံတွေရဲ့ နေရာမှာသာရှိနေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုခံစားရမလဲမသိဘူး။
လူဘ၀မှာ အရေးကြီးဆုံးက အစားအစာ၊ နေစရာအိမ်နဲ့ အ၀တ်အစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကြေးနီစီမံကိန်းကြောင့်မုံရွာဒေသခံတွေ နေစရာမဲ့တော့မယ်။ ပြီးရင် လုပ်ကိုင်စားသောက်စရာမြေနေရာလည်းမဲ့တော့မယ်။ ဒါတွေမဲ့ပြီးဆိုရင် ဘယ်လိုမျိူးအ၀တ်အစားဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံရတော့မှာလဲ။ ကြေးနီစီမံကိန်းကနေ ပေးတဲ့ငွေနဲ့ ဒေသခံတွေ ဘယ်လိုမျိူးတစ်သက်လုံးစားမလဲ။
အစိုးရကပေးတဲ့ သူတို့ အတွက်ရွေးချယ်စရာဆိုတာက အင်မတန်ကို နည်းပါးလှတယ်။
ရွာသားတွေတောင်းနေတာက စီမံကိန်းကို ဖျက်ပေးပါ။ သူတို့ ရွာတွေကို မရွှေ့ ချင်ဘူး။ ဒါပဲ။
ဒီကိစ္စကို ၈၈-မျိူးဆက်လို့ ခေါ်တဲ့ ကိုဂျင်မီတို့ အဖွဲ့ က ဆန္ဒပြပြီးမတောင်းနဲ့ ဆိုတော့ ဘယ်လိုတောင်းရမှာလဲလို့ တောင်မေးရတော့မယ်။ ကိုဂျင်မီတို့ အဖွဲ့ ဟာ ဒေသခံတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို နားမလည်လို့ လုပ်တာပဲ။ နောက်ပြီး နိုင်ငံတကာက မိုင်းတွေ ဘယ်လိုစီမံခန့် ခွဲလဲဆိုတဲ့ ဗဟုသုတကိုလည်းမသိဘူး။ ရွာသားတွေရဲ့ မျက်ရည်တွေဟာ စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့ ကျတဲ့ မျည်ရယ်တွေမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ ရဲ့ ဘ၀ဖြစ်တဲ့မြေတွေကို သိမ်းမှတော့ အားနည်းတဲ့လူတွေက မျက်ရည်ကလွဲလို့ ဘာနဲ့ အစားထိုးတင်ပြရမှာလဲ။
သူတို့ လိုပဲ....ကျူးကျော်ရပ်ကွက်ကနေ ဖယ်ပေးရတဲ့လူတွေ...လယ်မြေတွေအသိမ်းခံရတဲ့လူတွေရဲ့ မျက်ရည်တွေဟာလည်း ဘ၀နဲ့ ရင်းပြီး ကျတဲ့မျက်ရည်တွေပါ။ ဒါတွေကို အစိုးရကော အတိုက်အခံကော ၈၈-လို့ ခေါ်တဲ့လူတွေပါ အားလုံး ရင်နဲ့ ခံစာပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချစေချင်တယ်။
ကြေးနီးစီမံကိန်းအတွက် တရုတ် Company က မြေတစ်ဧကအတွက် ဒေါ်လာ သုံးထောင့်ငါးရာပေးပါတယ်။ လျှော်ကြေးအဖြစ်ပါ။ အပိုင်သိမ်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ငှားရမ်းခလို့ ပြောပါတယ်။ ဒါကို ဦးပိုင်က ခေါင်းပုံဖြတ်ပြီး မြေပိုင်ရှင်တွေကို တစ်ဧကအတွက် သုံးသိန်းပေးတယ်။ သုံးသိန်းဆိုတာက ဒေါ်လာသုံးရာကျော်လေးပါ။ ဆိုတော့ ကျန်တဲ့ ဒေါ်လာသုံးထောင်ကျော်ကို ဘယ်သူတွေယူသွားလဲ။ မြန်မာငွေနဲ့ ဆိုရင် သိန်းသုံးဆယ်နီးပါပဲ။ တချိူ့ လယ်သမားတွေဆိုရင် လယ်ဧကပေါင်းများစွာပိုင်တယ်။ သူတို့ ရသင့်မြေဧကအတွက် သိန်းလေးငါးခြောက်လောက်တော့ ငှားရမ်းခအဖြစ်ရသင့်တယ်။ ဒီငွေရရင် သူတို့ အနေနဲ့ အခြားနေရာမှာ သွားပြီး ၊ လယ်တွေဝယ်ပြီး ၊ ဘ၀သစ်ကိုထူထောင်လို့ တောင်ရတယ်။ အခုတော့ သူတို့ ရတဲ့ငွေကတပြားနှစ်ပဲနဲ့ ဆိုတော့ သူတို့ ပြောနေတဲ့စီမံကိန်းရပ်ပါဆိုတဲ့စကားက အရမ်းကိုမှန်ပါတယ်။
ကြေးနီစီမံကိန်းကို ဒေါ်လာ သန်းထောင်ကျော်တန်တဲ့ စီမံကိန်းအဖြစ် တိုးချဲ့ ဖို့ ဖြစ်တော့ မြေတွေလိုပါတယ်။ ဒီမြေတွေကနေ သန်းထောင်ကျော်ချီပြီ အမြတ်ငွေကို ဦးပိုင်နဲ့ အစိုးရကပဲ ရပါတော့မယ်။
နောက်ပြီး စီမံကိန်းမှာ ဒေသခံလယ်သမားတွေကို အလုပ်အကိုင်ပေးမှုက အင်မတန်မရှိသလောက်ပဲ။ ပေးတဲ့လစာကလည်း အရမ်းကိုနဲတယ်။ ဆိုတော့ ဆင်းရဲလှတဲ့ရွာသားတွေပဲ အရှုံးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတယ်။ သူတို့ ဘ၀တွေကို ကယ်တင်ဖို့ မစဉ်းစားပဲ၊ ဖျက်ဆီးပြစ်ဖို့ လောက်စဉ်းစားသလိုဖြစ်နေပြီ။ ပြီးတော့ ငါတို့ ကို လူထုက ကြည်ညိုနေတာကို အခွင့်အကောင်းယူပြီး လယ်သမားတွေဘက်ကမရပ်ပဲ အစိုးရဘက်ကရပ်တဲ့ ကိုဂျင်မီတို့ အဖွဲ့ ကို မေးခွန်းထုတ်ရပါတော့မယ်။ ဒါကတော့ ခင်ဗျားတို့ နိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့လူလား၊ ခင်ဗျားတို့ ဆရာကြီးလုပ်ချင်နေတဲ့လူတွေလားလို့ မေးရတော့မယ်။
သြစတျေးလျနိုင်ငံမှာ Multinational companies ကြီးတွေ သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကြတယ်။ သူတို့ က ဒေသခံလယ်သမားတွေပိုင်တဲ့ မြေနေရာတွေကို ငှားပြီးတူးရတယ်။ ဒီတော့ Company အနေနဲ့ ခွင့်ပြုချက်နှစ်ခုတောင်းရတယ်။ ပထမဦးဆုံး ဒေသခံတွေဆီကနေ ယူရတယ်။ နောက်ပြီးအစိုးဆီမှာ ရှာဖွေတူးဖော်ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ရတယ်။
ဒါတင်မဟုတ်သေးဘူး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ရှေးဟောင်းအမွှေအနှစ်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနတွေဆီကလည်း ခွင့်ပြုချက်ယူရတယ်။
နောက်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်တဲ့အဖွဲ့ အစည်းတွေရဲ့ သဘောတူညီချက်၊ လူ့ အခွင့်အရေးအဖွဲ့ တွေရဲ့ သဘောတူညီချက်တွေကိုလည်း ယူရသေးတယ်။ ဆိုတော့ မိုင်းတူးဖို့ အတွက်ကို မတူးခင်ကတည်းက အားလုံးရဲ့ သဘောတူညီချက် နဲ့ ကျေနပ်မှ ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ပါတယ်။
ဒါကို အင်္ဂလိပ်လို့ ခေါ်ရင် Stakeholders Engagement and Sustainable Mining လို့ ခေါ်တယ်။ ဒါကိုသေသေချာချာလုပ်ရင် နှစ်ဦးနှစ်လုံးအကျိုးရှိတော့ နိုင်ငံတကာမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် အဓိက ထားပြီးအကောင်အထည်ဖော်ကြတယ်။
ရှာဖွေနေတဲ့အချိန်မှာ အစိုးရရဲ့ ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်တွေကို လိုက်နာမှု့ ရှိမရှိ အစိုးရက ပုံမှန်စစ်ဆေးတယ်။ အခုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်စပတ်ရှင်လို့ ခေါ်တဲ့ အဖွဲ့ ရှိတာတောင် အဲဒိအဖွဲ့ က မုံရွာစီမံကိန်းအရေးမှာ ဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူး။ အတော်လေးကို တာဝန်မဲ့တဲ့ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနပဲ။ ဒီဌာနရဲ့ အထက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေစိုးမိုးနေတာဆိုတာ အရမ်းကိုထင်ရှားနေတယ်။ နောက်ပြီး သူဌေးတွေက ဥပဒေကို စိုးမိုးထားတယ်လို့ ကျနော်တွေးမိတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မုံရွာမှ မျက်ရည်တွေ နဲ့ပြည့်နေတာပါ။
မိုင်းတစ်ခုကို တူးပြီးတဲ့အချိန်၊ ပြီးခါနီးအချိန်မှာ ဒေသခံတွေအတွက် မိုင်းကို ပြန်လည်ပြုစုပြိုးထောင်ပေးရတယ်။ မြေတွေတူးထားတာကို ဖုံးအုပ်ပေးတယ်။ ရေညစ်တွေကို ပြန်လည်သန့် စင်ပေးရတယ်။ ဘယ်လို သန့် စင်ပေးလဲဆိုတော့ Natural Agent လို့ ခေါ်တဲ့ ဓာတုရည်နဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
သစ်ပင်တွေပြုန်းတီးကုန်တာကို ပြန်စိုက်ပေးရတယ်။ အနည်းဆုံးအဲဒိကိစ္စကိုလုပ်ပေးရတယ်။ မိုင်းတူးတော့ သစ်ပင်တွေကုန်တာက အဓိကပဲ။
သားကောင်တွေသေဆုံးကုန်တာကို ပြန်လည်မွေးမြူပေးရတယ်။ ဒါ့ကြောင့်နိုင်ငံတကာ Company ကြီးတွေရဲ့ မိုင်းတွေမှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့် ခွဲမှုဌာ (Department of Environmental Management) ဆိုပြီးသီးသန့် ထားပေးတယ်။ လစာငွေကို တနှစ်ကို ဒေါ်လာသိန်းနဲ့ ချီပြီးပေးရတယ်။ သူတို့ တာဝန်က မိုင်းမတူးခင်နဲ့ တူးပြီးတဲ့အချိန်တွေမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို မပျက်စီးရအောင် စီမံပေးရတယ်။ ပျက်ကွက်ရင်တော့ ဒေါ်လာသန်းချီပြီးလျှော်ရတယ်။ ဒါကို အစိုးရက ပုံမှန်စစ်ဆေးတယ်။ စောင့်ကြည့်တယ်။ မီဒီယာကလည်း လစ်ရင်လစ်သလို သတင်းပို့ တယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်အပြင် ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေကို မပျက်စီးရအောင် ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ဆိုင်ရာဌာနတွေက ပုံမှန်စစ်ဆေးတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဒေသခံတွေ ကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့ အမွေအနှစ်တွေလည်းပါတော့ ဒေသခံတွေလည်း စစ်ဆေးရတယ်။ မထိခိုက်အောင် မိုင်းတွေက တာဝန်ယူရတယ်။ မုံရွာမှာ လယ်တီဆရာတော်ကြီး သချိုင်းကို ပတ်လည်ကနေ တူးပြီး ဒီအတိုင်းထားတာတော့ မဆိုးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မိုင်းတူးပြီးတာနဲ့ မြေတွေကို ပြန်ပြီးဖုံးပေးဖို့ တော့လိုတယ်။ စိုက်ပျိုးစားနိုင်တဲ့အထိ ပြုပြင်ပေးဖို့ လိုတယ်။ လူထုက စိတ်ဆင်းရဲနေတာတွေကို စိတ်ပညာရှင် ကောင်ဆယ်လာတွေနဲ့ ကုပေးဖို့ လိုတယ်။ ဒါကို တူးတဲ့လူတိုင်း တာဝန်ယူရတယ်။
အဓိက လက်တလောလုပ်ပေးရမှာ စီမံကိန်းကို မရပ်နိုင်ဘူး၊ လက်လွန်နေပြီဆိုရင် ဒေသခံတွေ ကြေနပ်တဲ့အထိကို တာဝန်ယူရ လိ့မ်မယ်။ ဒါကတော့ တရုတ်ပေးတဲ့လျှော်ကြေးအတိုင်း အတိအကျပေးဖို့ လိုတယ်။ နောက်ပြီး မိုင်းတူးပြီးတာနဲ့ ရွာသားတွေကို မြေတွေပြန်ပေးရမယ်။
ကြေးနီစီမံကိန်းကနေ ထွက်တဲ့ အမြတ်ငွေက ဒေါ်လာသန်းထောင်ချီရှိမှာဆိုတော့ အဲဒိငွေထဲကနေ ပတ်ဝန်းကျင်က ရွာသားတွေရဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ စိတ်ပျော်ရွှင်ဖို့ အရေးအတွက် ရာခိုင်နှုံး ငါးရာခိုင်နှုံးလောက်ကို အနည်းဆုံးသုံးစွဲသင့်တယ်။ ဒါကို ဒေသခံတွေက တောင်းဆိုဖို့ လိုတယ်။ ခင်ဗျားတို့ မှ မတောင်းရင် ဘယ်သူကမှ စေတနာကောင်းပြီးပေးမှာမဟုတ်ဘူး။
သြစတျေးလျက ကျနော်လုပ်နေတဲ့မိုင်းမှာ တရက်ကို ဘယ်လောက် တူးပြီးပြီ၊ ရွှေဈေးဘယ်လောက်ရှိတယ်၊ ဘယ်လောက်အမြတ်ရနေပြီဆိုတာကို အလုပ်သမားတိုင်းသိအောင် ကွန်ပြူတာအကြီးကြီးနဲ့ ကြေငြာထားတယ်။ လူဘယ်နှစ်ယောက်ထိခိုက်လဲ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှု့ ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုလည်း အဲဒိကွန်ပြူတာမှာ မြင်နေရတယ်။ အဲဒိလိုပုံစံက မိုင်းတိုင်းမှာ ကျင့်သုံးတယ်။ အကြောင်းကတော့ ပွင့်လင်းမှု့ ကို ပေးသိတာပါ။ ဒါမှ အလုပ်သမားတိုင်း ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသိပြီး အားလုံးရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု့ လို့ ခေါ်တဲ့ ပါတီစီပေးရှင်းနဲ့ မော်တီဗေးရှင်းလို့ ခေါ်တဲ့ လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်ကို မြှင့်ပေးတယ်လို့ ခေါ်တယ်။ ဆိုတော့ အောင်မြင်မှု ရတယ်။
မုံရွာကကြေးနီးစီမံကိန်း၊ ဦးတေဇတို့ တူးနေတဲ့နစ်ကယ်စီမံကိန်း၊ ကချင်ဘက်မှာတူးနေတဲ့ ရွှေစီမံကိန်း၊ ရခိုင်ဘက်က သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စီမံကိန်း၊ စတဲ့ စီမံကိန်းတိုင်းဟာ တကယ်တမ်းလုပ်ချင်ရင် ပွင့်လင်းချင်ရင် အောင်မြင်ချင်ရင် လွယ်လွယ်လေးပါ။
အဓိက လူထုရဲ့ အကျိုးကို ခင်ဗျားတို့ ရဲ့ မိုင်းတူးလို့ ရတဲ့ အမြတ်ငွေထဲက ငါးရာခိုင်နှုံးကိုပဲ သုံးလိုက်ပါ။
ရေးသားသူ - ---- at Saturday, September 22, 2012
မိဘတွေက သားသမီးတွေကိုဆင်းစီးပြီး မြင်းရံတာကို မြင်ချင်တယ်။ ဒီခေတ်မှာတော့ ကားစီးပြီး တိုက်တွေတာတွေ ရံတာကိုမြင်ချင်ကြတယ်။ ဘယ်သူမဆို ကြီးပွားတိုးတက်ချင်တာ သဘာဝပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျနော့်အတွေ့ အကြုံအရဆိုရင် တချိူ့ သောလူတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ကျိုးစားအားထုတ်မှု့ မပါပဲ ကြီးပွားချင်ကြပါတယ်။
မိန်းမပျိုတစ်ယောက်ဟာ သူယူမဲ့ ယေက်ျားကို ရွေးတဲ့အခါမှာ ငွေရှိရင်ရှိ မရှိရင် မှီခိုနိုင်လောက်တဲ့အရည်အချင်းရှိမှ ယူပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီနေရာမှာ မေးစရာတစ်ခုရှိတယ်။ ကိုယ်ကြတော့ အသုံးကျအောင်မလုပ်ပဲ ယောက်ျားလုပ်စာနဲ့ ကြီးပွားချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်က တကယ်ကော ကိုယ့်ဘ၀အတွက် အထောက်အကူပြုပါ့မလား။ လောကမှ ဒီလိုလူတွေအများကြီးပါ။
ကျနော်တို့ ဟာ မိမိကိုယ်ကိုယ်အားကိုးပြီး ကျိုးစားမှသာ ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ ကြီးပွားမှု့ ကို ရမှာပါ။ ယနေ့ မှာ တွေ့ ရတဲ့ မိန်းမအများစုဟာ ပိုက်ဆံရှိမှ၊ နိုင်ငံခြားကကောင်မှ၊ ပညာရှိမှဆိုပြီး သူတို့ အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ တကယ်တော့ ဒါဟာ အင်မတန်ကို စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကျတဲ့မိန်းမတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သူတို့ မေ့နေကြတယ်။ ကိုယ်ကြတော့ အရည်အချင်းရှိအောင်မလုပ်ပဲ သူများလုပ်စာကို မှီခိုချင်ကြတယ်။
မိန်းမတွေလိုပဲ ယောက်ျားတွေလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ကျနော်တွေ့ ဘူးတဲ့ လူတစ်ချို့ ဆိုရင် ကိုယ့်အသက်အရွယ်ကိုမှ အားမနာပဲ အသက်ကြီးကြီးအဘွားကြီးနဲ့ နေတယ်။ သူ့ ဆီက ငွေတွေကို ချူစားတယ်။ သောက်စားမှုးယစ်ပျော်ပါးတယ်။ အဘွားကြီးကလည်း ဒါမျိူးကို သဘောကြတယ်။
ဒီလိုမျိုးမိန်းမနဲ့ ယောက်ျားတွေကို ကျနော်တို့ လူ့ အဖွဲ့ အစည်းမှာ အများဆုံးတွေ့ နေရတယ်။
သြစတျေးလျနိုင်ငံမှာ ၀င်ငွေကလည်း မဆိုးတော့ တချိူ့ သော ယောက်ျားတွေဖောက်လွဲ ဖောက်ပြန်လုပ်ကြတယ်။
အရင်တုန်းကတော့ ငတ်ပြတ်စုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့ဘ၀တွေမှာတုန်းက မကွဲခဲ့တဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေငွေကြောင့်ကွဲခဲ့ရတယ်။
ယောက်ျားက ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်အားနဲ့ အပင်ပန်းခံပြီး အိမ်တွေဝယ်တယ်။ ကားတွေဝယ်တယ်။ နောက်ပိုင်း လင်မယားလည်းကွဲရော...ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့အိမ်ပေါ်မှာ ဘယ်ကကောင်မှန်းမသိတဲ့ကောင်က ကိုယ့်ရဲ့ ခုတင်ပေါ်မှာ ကိုယ့်မိန်းမကို ဂျစ်ကီ ဂျစ်ကီလုပ်တယ်။ ၀ယ်ထားတဲ့ကားကိုလည်း သူနဲ့ မိန်းမက မောင်းတယ်။ ခလေးတွေက ဘ၀ပျက်လို့ ။ ဆိုတော့ တစ်ခါတလေတွေးမိတာက လင်မယားတွေမကွဲခင်တုန်းက ၀ယ်လိုက်ကြတဲ့အိမ်တွေ၊ ကားတွေ၊ ပစ္စည်းတွေ...နောက်ပိုင်းကြတော့ အဲဒိဟာတွေကို တစိမ်းတွေက ပိုင်ဆိုင်ပြီး ကိုယ့်ကုတင်ပေါ်မှာတောင် တက်ပြီး ကျိတ်ပါတော့တယ်။ ဘယ်လောက်ရင်နာစရာကောင်းလဲ။ နောက်ဆုံး သြစီဥပဒေအရ မိန်းမပဲ တပန်းသာပါတော့တယ်။ ဘယ်မှာလဲ ယောက်ျားတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့်။ နောက်ဆုံး အိမ်ပေါ်ကပဲ ဆင်းပေးခဲ့ရတယ်။
ယောက်ျားတွေကလည်း လောင်တီးသလို၊ မိန်းမတွေကလည်း အဖောင်တုတ်တယ်။ ငွေလေးများရွှင်လာရင်ပြောတာပါ။ သူတို့ နှစ်ဦးကြောင့်ဘယ်သူတွေ အဓိက နစ်နာရလဲဆိုတဲ့ အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကိုမကြည့်ပဲ ဟိုဟာကိုပဲ ဦးစားပေးကြတယ်။ ခလေးတွေပဲ ပျက်စီးရတော့တယ်။
ကျနော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မိုင်းမှာ နှစ်ပေါင်း ၁၈-နှစ်လုပ်တယ်။ လေယျာဉ်နဲ့ အသွားအပြန်အလုပ်ဆင်းရတော့ အိမ်နဲ့ ဝေးတယ်။ သူ့ မိန်းမက ဖိလစ်ပိုင်မ။ သူကမြန်မာ။ ကြာလာတော့ သူ မရှိတဲ့အချိန်မှာ သူ့ မိန်းမက ကျနော့်သူငယ်ချင်းဝယ်ထားတဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာ နောက်တစ်ယောက်နဲ့ ကုန်းလို့ ။ ဒါကို သူသိသွားတော့ လင်မယားတွေကွဲကြတယ်။ ခလေးတွေ အခြေအနေပျက်ခဲ့တယ်။ ကျနော့်သူငယ်ချင်းဂေါက်တယ်။ နောက်ဆုံး အိမ်နဲ့ ကားတွေကို သူ့ မိန်းမရတယ်။ ဒီလိုဘ၀မျိူးတွေဟာ သြော်စတျေလျးအပါအ၀င်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေမှာလည်း ဖြစ်ကြပါတယ်။
လူတွေဟာ အစားချောင်အနေချောင်တာကို အင်မတန်သဘောကြတယ်။ မြန်မာပြည်မှာနေတုန်းကဘ၀တွေဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကို နိုင်ငံခြားရောက်တဲ့လူတွေအများစု မေ့သွားကြတယ်။ ပညာသင်လို့ ရတဲ့ နိုင်ငံမှာ အခွင့်အလမ်းရှိတာတောင် မသင်တဲ့မြန်မာတွေရှိခဲ့တယ်။ အစိုးရက ပေးတဲ့ပိုက်ဆံပေါ်မှာ သာယာပြီး ခလေးတွေအများကြီးမွေးပြီး အပျင်းတစ်ခဲ့ကြတယ်။ အစိုးရစရိတ်နဲ့ ထိုင်စားတယ်။ နိုင်ငံရေးစကားကို အစိုးရပိုက်ဆံစားပြီး ပြောတယ်။ ဘာတွေဖြစ်ကုန်မှန်းတောင်မသိပါဘူး။
မြန်မာပြည်ထဲကလူတွေက နိုင်ငံခြားက ကောင်တွေကို အထင်ကြီးတယ်။ ပိုက်ဆံချမ်းသာတယ်လို့ ထင်ကြတယ်။ ဒီမှာဘယ်လိုနေရထိုင်ရ လုပ်ရလဲဆိုတာကို မရောက်ဘူးတော့ မသိဘူး။ တောင်းလိုက်တဲ့ငွေ။ ပေးပါအုံးဟဲ့...တယ်လီဖုန်းလေး၊ အိုင်ပတ်လေးနဲ့ ကွန်ပြူတာ။ သူတို့ မှာက ပါးစပ်ပဲ ရင်းရတယ်။ အကျင့်ပါနေကြပြီ။ နိုင်ငံခြားကကောင်ကလည်း တောင်းပြီးဆိုရင် ပေးချင်ပြီ။ ကိုယ်ကပြန်ရှာလို့ လွယ်တာကိုး။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်က အလကားရတိုင်း တောင်းချင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကို မကြိုက်တာပါ။ သူများဆီကဟာကို ပါးစပ်နဲ့ ကလေးရင်းပြီး သနားအောင်ပြော၊ မရရင်လိမ်တောင်းတဲ့ ဗမာစောက်ကျင့်တွေကို အင်မတန်မုန်းပါတယ်။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မိန်းခလေးတွေ နိုင်ငံခြားကလူတွေကို အထင်ကြီးတယ်။ မင်းသမီးတွေကအစ။ ဘာ့ကြောင့်အထင်ကြီးလဲဆိုတော့ ပိုက်ဆံရှိတယ်လို့ ထင်လို့ ပါ။ သူတို့ ယူတယ်။ သွားမရှိရင်နေပါစေ နိုင်ငံခြားကဆိုရင်ပြီးရောပဲ။ သြစတျေးလျမှာ ဒီလိုမျိူးတွေတစ်ပုံကြီးရှိတယ်။ အဖိုးကြီးတွေ မြန်မာပြည်က သမီးအရွယ်လေးတွေကို ယူတယ်။ အဲဒိအဖိုးကြီးတွေက အလုပ်လည်းမရှိဘူး။ အစိုးရစရိတ်နဲ့ စားရတဲ့လူတွေ။ ဒါကိုမသိပဲ ရန်ကုန်က ကောင်မလေးတွေယူကြတယ်။ နောက်ပိုင်း အဲဒိအဖိုးကြီးကို ကောင်မလေးက ပြန်လည်ပြီးပြုစုပေးရတယ်။ ထမင်းချက်ကြွေးရတယ်။ ညဖက်မှာ ဖင်ခံရတယ်။ ရေချိူးပေးရတယ်။ သြစတျေးလျရောက်တာပဲ အဖတ်တင်တယ်။ နောက်ဆုံး ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်ပြီး ကြီးတော်နွားကျောင်းကြရတယ်။ သူမခင်ဗျာ ဖင်လည်းခံရသေးတယ်။ နောက်ဆုံး မြန်မာပြည်က ငတ်နေတဲ့အမျိူးတွေကိုလည်း ပိုက်ဆံပြန်ပေးရသေးတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ မနေချင်ပဲနေရတဲ့ အဲဒိလို မြန်မာမိန်းခလေးတွေအများကြီးပဲ။
ပိုက်ဆံလည်းတပြားနှစ်ပဲနဲ့ ဘ၀တွေ မသိမသာ ပျက်စီးခဲ့ကြတာကို ရင်နာလို့ မဆုံးဘူး။
နိုင်ငံရေးလောကအပါအ၀င် ဘာသာရေးလောကမှာလည်း ဒီလိုပဲ။ အားလုံးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ဓာတ်တွေအင်မတန်အောက်တန်းကျကြတယ်။
အခုဆိုရင် ကျနော်တို့ မြင်နေရတဲ့ နိုင်ငံရေးလောက က လူတွေ သူတို့ ကိုယ်သူတို့ မှန်တယ်လို့ ထင်ကြတယ်။ ထောက်ခံတဲ့သူကလည်းထောက်ခံတာဆိုတော့ ငါတို့ လုပ်တာ မှန်တယ်လို့ ထင်တာပဲဖြစ်မယ်။
ဥပမာ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ အုပ်စု။ ကိုယ့်ထမင်းကို ရှာစားတဲ့လူတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ သူတို့ ကို သူများတွေက ကျွေးရတဲ့ဘ၀ဖြစ်နေပြီ။ အဲဒါကို ပြင်ဖို့ လည်း အစီအစဉ်မရှိဘူးထင်တယ်။ နောက်ပြီး ကိုမိုးသီးဇွန်တို့ အဖွဲ့ ၊ ဒေါက်တာနိုင်အောင်တို့ အဖွဲ့ …စသဖြင့် သူတို့ အားလုံးဟာ ဘယ်တုန်းကမှ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်ပြီးထမင်းစားလာတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ဦးမောင်မောင်ကစလို ကိုအောင်မိုးဇော်တို့ အဆုံး သူတို့ ဘယ်နှစ်ခါများ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားခဲ့လို့ လဲ။ မစားခဲ့ပါဘူး။ အထက်ကပြောတဲ့ မိန်းမအချို့ လို သူများလုပ်စာအပေါ်မှာပဲ မှီခိုရပ်တည်ချင်နေကြတယ်။ အန်ဂျီအိုကသာငွေမပေးရင် ဒုက္ခပဲ။ ဒါကို မသိတဲ့ပြည်သူအချို့ က နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်လို့ သတ်မှတ်ကြတာကို မအံ့သြပါဘူး။
နောက်ဆုံးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ မြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်ပြီးကတည်းက သူ ဘာနဲ့ ထမင်းစားလဲမသိဘူး။ အလုပ်မလုပ်ပဲ ဒီအတိုင်းနေတော့။ ဆိုတော့ နိုင်ငံရေးသမား၊ အစိုးရ၊ စစ်တပ်တွေကို နောက်ဆုံးပြည်သူရဲ့ ဝင်ငွေထဲကနေပဲ ကျွေးရမွေးရပါတယ်။
ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ထဲက လူတွေဟာ အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ ယှဉ်ရင် စိတ်ဓာတ်က အင်မတန်သေးသိမ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ ကျနော်သတိထားမိတာတစ်ခုရှိတယ်။ အင်္ဂလိပ်တွေ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ပြီး ထမင်းစားတယ်။ သူတို့ ခလေးတွေကလည်း သူ့ အဖေနဲ့ အမေက ပိုက်ဆံရှိပေမဲ့ ကိုယ့်ပိုက်ဆံကိုပဲတန်ဖိုးကြတယ်။ ဘယ်သူ့ ဆီကမှ လက်ဖြန့် ပြီးမတောင်းကြပါဘူး။ ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိူးကတော့ နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြတယ်။ ငတ်နေတဲ့ပြည်သူတွေကို အကြောင်းပြတယ်။ ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြတယ်။ ဒါတွေကို ဘန်းပြပြီး ပိုက်ဆံတောင်းတယ်။
အခုဆိုရင် ကချင်ဘက်က စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေ၊ ရခီးတွေဘက်က ဒုက္ခသည်တွေ ရှိကြတယ်။ ဒီပြသနာတွေအားလုံးကို ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိူးတွေပဲဖန်တီးတာပါ။ တရုတ်ကလည်းဖန်တီးတာမဟုတ်သလို၊ ကုလားကလည်း ဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူး။ နောက်ဆုံးအမေရိကန်လည်း လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ မြန်မာလူမျိုးတွေပဲ ဒုက္ခသည်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြတာ။ ပြီးရင် အဲဒိဒုက္ခသည်တွေကိုဘန်းပြပြီးအစိုးရကလည်း အကူအညီတောင်းသလို၊ အတိုက်အခံကလည်း ပေးပါအုံးဟဲ့…ကူညီပါအုံးဟဲ့ဆိုပြီ လုပ်ကွက်အမျိူးအမျိုးနဲ့ ပိုက်ဆံတောင်းတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ နိုင်ငံတကာနဲ့ ပြည်သူလူထုငွေထဲကနေပဲ ပြန်ပြီးကူညီပေးရတယ်။ အတိုက်အခံနဲ့ အစိုးရရဲ့ အိပ်ကပ်ထဲက ဘယ်နှစ်ခါပေးဘူးလဲ။ သူတို့ နှစ်ဦးကလည်း ကိုယ့်လုပ်စားနဲ့ စားတဲ့လူတွေမဟုတ်တော့ ဘာနဲ့ ပေးမှာလဲ။ ပြီးတော့ သူတို့ က သူရဲကောင်းကြီးလိုလို၊ စာနာသူကြီးလိုလို လုပ်ကြပြန်ရော။ တကယ်တမ်းတွေးကြည့်ရင် မြန်မာတွေလုပ်ရပ်က စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကြတဲ့လုပ်ရပ်တွေလိုပဲ။
အစိုးရက ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအကူအညီ သန်းကိုရာနဲ့ ချီပြီးရတယ်။ အဲဒိငွေတွေကို အစိုးရကိုင်ထားပြီး ဘယ်မှာဘယ်လောက်သုံးတာလဲဆိုတာကိုလည်းမသိရဘူး။ ပြည်တွင်းစစ်ကို သူတို့ ပဲဖန်တီးတယ်။ ပြီးရင် သူများတွေက သူတို့ ကို ပိုက်ဆံပေးရတယ်။ အတော်ရီရတဲ့လူတွေပဲ။ နောက်ဆုံး ဦးသိန်းစိန်ကတောင် ဆုတွေဘာတွေရလို့ ။ ဒေါ်စုကတော့မပြောနဲ့ တော့။ တော်လှန်ရေးမှာ လူတိုင်းပါဝင်ပေမဲ့ လူတိုင်းဆုမရဘူး။ လူတိုင်း ခေါင်းဆောင်မဖြစ်ဘူး။ လက်ချိူးရေလို့ ရတဲ့လူတွေလောက်ပဲ လည်သူစားစတမ်းဆိုသလိုပဲ။
အဓိကပြင်ရမှာ မြန်မာတွေရဲ့ အဲဒိလို့ စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကြမှု့ ၊ အချောင်စားချင်တဲ့စိတ်၊ မယောင်ရာဆီလူးချင်တဲ့စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ သေသေချာချာတွေးကြည့်ရင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမပြေလည်စေတဲ့အချက်ကတော့ အစိုးရမှာပဲ တာဝန်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ တိုင်းသူပြည်သားအာလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်။ အားလုံးမပြင်နိုင်သေးသ၍ ဘယ်တော့မှ ကျနော်တိုင်းပြည်ဟာ သူများနိုင်ငံတွေလို တိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ပြင်ဖို့ လူတွေအထဲမှာ ကျနော်လည်းရှေ့ တန်းကနေ ပါဝင်တယ်ဆိုတာကို ပြောချင်လို့ ပါ။
၉၊ ၉၊ ၂၀၁၀
ရေးသားသူ - ---- at Sunday, September 09, 2012
လွတ်လပ်ရေး ရပြီးတော့လည်း သေခဲ့တယ်
ပြည်တွင်းစစ်ပွဲမှာ ကိုယ့်အချင်းချင်းလည်းသေခဲ့သလို အရပ်သားတွေလည်းသေခဲ့တယ်။
စစ်တပ်ကကျောင်းသားတွေကို သတ်လို့ သေခဲ့တာ ရှိသလို..
စစ်သားအချင်းချင်းလည်း သတ်လို့ စစ်သားတွေသေခဲ့တာပဲ။
မြောက်ပိုင်းက သုံးဆယ်လောက် သေတာကိုများ ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်လို့ ။
မနေ့ တစ်နေ့ ကပဲ ကချင်ဘက်မှာ ခုနှစ်ဆယ်လောက် တရက်အတွင်းမှာ သေခဲ့တယ်။
ဒါတွေကို ပြောနေမဲ့အစား အနာဂတ်မှာ အချင်းချင်း ဒီလိုမသတ်ကြရအောင် မသေရအောင်....
လုပ်တာက မှ အကျိူးမရှိဘူးလား...။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Sunday, September 02, 2012
နောက်ဆုံးထုတ် ဗီးနပ်စ်ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြခံရသော ဆောင်းပါး
Thank You Very Much!!! Editor.
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Saturday, August 04, 2012
တရုတ်နိုင်ငံဟာ International Organization for Standardization (ISO) ရဲ့ မန်ဘာတစ်ဦးဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ အိုင်အက်စ်အိုရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာ အကောင်အထည်ဖော်ရပါတယ်။
ဆိုတဲ့ ဥပဒေပဲခေါ်ခေါ် စည်းမျဉ်းပဲခေါ်ခေါ် ခေါ်ချင်သလိုသာခေါ်ပါ။ ဒါတွေကို တရုတ်နိုင်ငံက လူတိုင်း၊ Company တိုင်းလေးစားလိုက်နာရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တရုတ်က မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပက်သက်ရင် အဲဒိလိုမလုပ်ပါဘူး။
အရည်အသေးနိမ်တဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်ပြီးရောင်းတယ်။ ပြည်တွင်းထဲမှာ တူးချင်သလိုတူးတယ်။ လုပ်ချင်သလိုလုပ်တယ်။
သြစတျေးလျအပါအ၀င်၊ ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကို ပိုတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကြတော့ အိုင်အက်စ်ကိုရဲ့ စည်းကမ်းကို လိုက်နာတယ်။ မြန်မာပြည်နဲ့ လုပ်ရင် စောက်ဂရုမစိုက်ဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့....မြန်မာနိုင်ငံဟာ အိုင်အက်စ်ကိုရဲ့ အဖွဲ့ ဝင်မဟုတ်လို့ ပါ။
ဒါ့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ Company တွေ ထင်တိုင်းကျဲနေတာပါ။ မြန်မာအစိုးရ အိုင်အက်စ်ထဲကို ၀င်ပါ။ ဒါဆိုရင် တိုင်းပြည်က ဒိထက့်ပိုပြီးစနစ်ကျလာပါမယ်။
ရေးသားသူ - ---- at Saturday, July 28, 2012
ကုမ္မဏီတိုင်း အမြတ်အစွန်းကိုပဲ အာရုံမစိုက်သင့်ပါ
၂ဝ၁၂-ခုနှစ်ရောက်လာတော့ ရွှေကြောအသစ်တွေ့ ဖို့ ကို အင်မတန်ခက်လာတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ခေတ်မှီနည်းပညာတွေနဲ့ တူးတဲ့လူတွေများလာလို့ ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတစ်ရာလောက်က အခြေအနေနဲ့အခု အခြေအနေမတူတော့ပါဘူး။ သယံဇာတတွေကုန်လာနေပြီ။
ရွှေဈေးကလည်း မကျတဲ့အပြင် တရိပ်ရိပ်နဲ့ တက်လာတယ်။ ကုန်ဈေးနှုံးကလည်း ကြီးလာတော့ အရင်ကလောက် ရွှေတူးတဲ့ကုမ္မဏီတွေ မမြတ်တော့ဘူး။ တွေ့ ပြီးသားရွှေကြောတွေကို တူးတာကလည်း နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ကုန်သွားမှာဆိုတော့ ရွှေကြောအသစ်အသစ်တွေကို ကုမ္မဏီတွေက အပြိုင်အဆိုင်ရှာလာပါတော့တယ်။
ရွှေတူးတဲ့ ကုမ္မဏီကြီးတွေမှာ ကမ္ဘာပတ်ပြီး ရွှေရှာဖို့ အတွက် သီးသန့် ဖွဲ့ ထားတဲ့ ဌာနရှိတယ်။ The Growth and International Project Team လို့ ခေါ်တယ်။ သူတို့ အလုပ်က နယ်လှည့်ပြီး ရွှေကြောဖြစ်နိုင်ခြေကို လိုက်ပြီး ရှာတယ်။
ပထမဆုံး သူတို့ အနေနဲ့ ရုံးခန်းထဲမှာထိုင်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်ကနိုင်ငံတွေထဲကနေ ရွှေထွက်များနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတွေကို ရွေးချယ်တယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ Global View of the Macro Geological Picutre on high level targeting လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဘာနည်းပညာကိုသုံးလဲဆိုတော့ Global Business Area Rating (GBar) ဆိုတဲ့နည်းပညာပါ။ ဒါကတော့ ရွှေထွက်များတဲ့နိုင်ငံတွေကို ရုံးခန်းထဲကနေ မြေပုံဆွဲတဲ့အတက်ပညာပါ။ ဥပမာ အမေရိကန်ကပိုင်တဲ့လန်းက် ဆဲဗင်းလို ဆက်တလိုက်နဲ့ လေ့လာသလို အခြားနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေနဲ့ လည်းလေ့လာတယ်။
ကုမ္မဏီကြီးတွေက ဘယ်နေရာမှာ Ore Body လို့ ခေါ်တဲ့ ရွှေကြောရှိလဲဆိုတာကို လူကိုယ်တိုင်မသွားခင်ကတည်းက အကြမ်းဖျင်းသိပါတယ်။
တကယ်လို့ ရွှေထွက်ကောင်းတဲ့နေရာကို တွေ့ ရင် သူတို့ အနေနဲ့ တိုက်ရိုက်ရှာဖွေရေးဆင်းပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ စက်ယန္တယားအကူအညီနဲ့Samples ကောက်တယ်။
တူးဖို့ အထိကို အဆင့်ဆင့်ကျော်ဖြတ်ရတယ်။ ရွှေကြောကြီးရင် ကြီးသလို လေးငါးနှစ်အထိ ရှာဖွေရေးလုပ်ရတယ်။ တကယ်လို့ ရွှေအထွက်နှုံးကောင်းတာကို တွေ့ ရင် ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ အမြတ်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာကို တွက်ချက်ရတယ်။ Resources Geologist ဆိုတဲ့ပညာရှင်က သူ့ ရဲ့ အဓိကအလုပ်ဖြစ်တဲ့ အမြတ်နဲ့ အရှုံးကို မတူးခင်ကတည်းက တွက်ပြီးသားပါ။ ဥပမာ ကျနော်တို့ ကုမ္မဏီဆိုရင် Rules of 2s ဆိုတဲ့ ပေါ်လစီကို ကျင့်သုံးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရွှေတွေ့ ပြီဆိုရင် သုံးလေးတန်လောက်ကို စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ ရွှေအောင်စနှစ်သန်းအနည်းဆုံးရှိရမယ်။ တနှစ်ကို ရွှေအောင်စ နှစ်သိန်းထွက်ရမယ်။ ဒိထက်နည်းရင် ကျနော်တို့ စိတ်မဝင်စားပါဘူး။
မြန်မာပြည်မှာ တစ်ပိုင်တနိုင်တူးတဲ့ လူတွေရှိတယ်။ ဒါကို အင်္ဂလိပ်လို့ ခေါ်ရင် Artisanal and Small-scale Mining (ASM) လို့ ခေါ်တယ်။ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဒီလိုလူတွေအများကြီးပါ။ မိရိုးဖလာလုပ်စားတယ်လို့ လည်း ဆိုလို့ ရတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ ဖွံ့ ဖြိူးဆဲနိုင်ငံတွေမှာ ပိုပြီးတွေ့ ရတယ်။ The World Gold Council က တစ်ပိုင်တနိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေဟာ သန်း ၈ဝ ကနေ သန်းတစ်ရာအထိ ရှိမယ်လို့ ခန့် မှန်းတယ်။ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်လာပြီး ဆိုရင် ဒီလိုအလုပ်ကိုလုပ်ကြတယ်။ အာရှမှာအများဆုံးပဲ။ ကမ္ဘာ့ရွှေထုတ်လုပ်မှု့ ရဲ့၁ဝ ရာခိုင်နှုံးကို တစ်ပိုင်တနိုင်တူးတဲ့လူတွေက ထုတ်လုပ်ပေးတယ်။ ကျန်တဲ့ ၉ဝ ကိုတော့ ကုမ္မဏီကြီးတွေက ထုတ်ပေးတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကုမ္မဏီကြီးတွေနဲ့ အဲဒိလို လူတွေကြားမှာ ပြသနာရှိတယ်။ ဘယ်လို ပြသာနာလဲဆိုတော့ လက်နဲ့ တူးတဲ့လူတွေက ရွှေရှိမဲ့နေရာကို သိတယ်။ သူတို့သိတာကို ကုမ္မဏီကြီးတွေက လေ့လာရတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒိနေရာ အကြီးအကျယ်တူးကြပါတယ်။ ဒီလိုဆိုတော့ လက်နဲ့ တူးတဲ့လူတွေ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြတယ်။ ဒါနဲ့ ကုမ္မဏီတွေကို ပြသာနာရှာရောပဲ။ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဂါနာ၊ ပီရှုး စတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ခုတ်ကြသတ်ကြတဲ့အထိဖြစ်ဘူးတဲ့ ဥပမာတွေရှိတယ်။ သေလိုက်တဲ့လူတွေကလည်း မနည်းဘူး။
ဒီလိုမဖြစ်အောင် ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ ကုမ္မဏီကြီးတွေက သူတို့ အတွက်လည်း စဉ်းစားပေးတယ်။ စီစဉ်ပေးတယ်။ ဘယ်လိုစီစဉ်ပေးလဲဆိုတော့ ကုမ္မဏီပိုင်တဲ့ နေရာမှာ လက်နဲ့ တူးတဲ့လူတွေအတွက် သီးသန့် နေရာ သတ်မှတ်ပေးတယ်။ တူးတဲ့လူတွေအနေနဲ့ စည်းကမ်းကို သတ်မှတ်ပေးတယ်။ ဒီလိုမှ မလုပ်ရင် ဖြစ်သလိုတူးကြရောပဲ။ တကယ်လို့ သာ နေရာသီးသန့် မလုပ်ပေးထားရင် ကုမ္မဏီနဲ့ အဲဒိလူတွေအကြားမှာ အကြီးကျယ်ပြသနာတက်နိုင်သလို သူတို့ လည်း ဘာနဲ့ ထမင်းစားမလဲ။ ဆိုတော့ နှစ်ဘက်လုံးအတွက် မျှမျှတတစဉ်းစားပေးရတယ်။
ဂါနာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ခဲ့တုန်းကဆိုရင် ကြောက်စရာအင်မတန်ကောင်းတယ်။ ကျနော်တို့ ကုမ္မဏီတူးနေတဲ့ ပိုင်နက်ထဲကို ဒေသခံတွေက အတင်းအဓမ္မ ဝင်ပြီးတူးတယ်။ လူပေါင်း ၂၅ဝဝ လောက်ရှိတယ်။ မောင်းထုတ်လည်း မရဘူး။ နောက်ဆုံး စစ်တပ်ကို ခေါ်တဲ့အထိဖြစ်လာရော။ တချို့ ဆိုရင် မိုင်းထဲမှာတောင် အပင်တွေ စိုက်ပျိူးစားတဲ့အထိဖြစ်ကြတယ်။ နောက်ဆုံး ဒေသခံတွေနဲ့ ကုမ္မဏီကြားမှာ အပေးယူလုပ်ရသလို ဂါနာအစိုးရရဲ့ အမိန့် ကိုလည်း နာခံရတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ သူတို့ အတွက် သီးသန့် နေရာကို တူးဖို့ အတွက် စီစဉ်ပေးရပါတယ်။
မိုင်းတူးတဲ့အခါမှာ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်အပြင် လူမှု့ ဘဝတွေကို ထိခိုက်စေတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်အောင် ကုမ္မဏီတွေအနေနဲ့ စဉ်းစားရတယ်။ နှစ်ဘက်လုံးအတွက် အကျိူးအမြတ်ရှိမှ လုပ်တယ်။ အထူးသဖြင့် ကုမ္မဏီတွေက အထူးတာဝန်ယူကြရတယ်။ တာဝန်မယူနိုင်ဘူး မယူချင်ဘူးဆိုရင် မတူးရဘူးလို့သြစတျေးလျနိုင်ငံ မိုင်းဥပဒေက အတိအလင်းပြဌာန်းထားသလို ကျူးလွန်ခဲ့ရင်လည်းလုံးဝကို အရေးယူတယ်။ လျှောက်လွှာတင်ကတည်းက ဒေါ်လာ သန်းနဲ့ ချီပြီး အပေါင်တင်ထားရတယ်။ ကျနော်တို့ ကုမ္မဏီက ၂၅-သန်းတင်ရတယ်။ အစိုးရရဲ့ ဥပဒေကို မလိုက်နာရင် အဲဒိငွေဆုံးပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်သူမှ မလှုပ်ရဲဘူး။
မိုင်းတူးရင် မြေရှင်းရတယ်။ မြေတူးရတယ်။ သစ်ပင်တွေခုတ်လဲရတယ်။ မိုင်းကြောင့် မြေအောက်ရေကအစ မြေပေါ်ရေအထိ ညစ်ညမ်းမှုတွေ ရှိတယ်။ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေအပြင် ရွာတွေကိုလည်း ထိခိုက်စေတယ်။ ကုမ္မဏီကတော့ ရွှေလိုချင်လို့ ရွှေတူးတာ ပြသနာမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုမျိူး အထက်ကပြောတဲ့ မြေရေလေလူစတဲ့ အရာကို မထိအောင် စီမံခန့် ခွဲမလဲ။
ပီရူးနိုင်ငံမှာ ကုမ္မဏီရဲ့ ရွှေတူးဖော်ရေးမိုင်းရှိတယ်။ မိုင်းပတ်လည်မှာ ဒေသခံရွာပေါင်းများစွာလည်း ရှိတော့ ကုမ္မဏီနဲ့ သူတို့ ရဲ့ ဆက်ဆံရေးပြေလည်စေဖို့ ၊ သူတို့ လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးရတယ်။ ပီရူးအစိုးရက ဘယ်လို ဥပေဒရှိလည်းတော့ မသိဘူး။ သို့ သော် ကျနော်တို့ ပေါ်လစီက သူတို့ ရဲ့အခက်အခဲကိုလည်းဖြေရှင်းပေးရမယ်လို့ ပြဌာန်းထားတယ်။ ဒါကို ဝန်ထမ်းတိုင်းလုံးဝ လိုက်နာပြီး အကောင်အထည်ဖော်ကြရတယ်။ ဒေသခံတွေအတွက် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးနဲ့ စည်းပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ကြီးထွားလာအောင်ကို အစီအစဉ်တွေချမှတ်အကောင်အထည်ပေးတယ်။ အဲဒိဒေသမှာ မိုင်းတူးတော့ ဝန်ထမ်းတွေလိုတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကလို ကုမ္မဏီတွေရဲ့ အလုပ်သမားတွေအားလုံးက တရုတ်နိုင်ငံကတင်သွင်းလာသလိုမျိူး လုပ်လို့ မရဘူး။ ရွာတွေကနေ အလုပ်သမားပေါင်း ၁၂ဝဝ-ကိုအလုပ်ခန့် တယ်။ သူတို့ က မိုင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုမရှိတဲ့အပြင် ဗဟုသုတလည်း အင်မတန်နည်းတယ်။ နိုင်ငံခြားက ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကနေ အဲဒိဒေသကအလုပ်သမားတွေကို လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ သင်တန်းတွေ၊ လက်တွေ့ တွေပေးတယ်။ ဥပမာ ဘူဒိုဇာမောင်းနည်းပညာ၊ မြေသည်စက်မောင်းနည်းပညာ၊ ပန်းရံပညာကစပြီး မီးပြင်တဲ့ပညာအဆုံး သင်တန်းတွေကို အချိန်ယူပြီးသင်ပေးတယ်။ ဒါကို The Driect Area of Influnece (DAI) လို့ ခေါ်တယ်။ သူတို့ လည်း ပညာနဲ့ အလုပ်ရသလို ကုမ္မဏီအတွက်လည်း တွက်ခြေကိုက်တယ်။ နိုင်ငံခြားက ဈေးကြီးကြီးပေးငှားရတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအစား ဈေးပေါတဲ့ဒေသခံတွေနဲ့ တင် မိုင်းကလည်ပတ်လို့ ရတော့ နှစ်ဘတ်လုံးအတွက် အဆင်ပြေတယ်။
ကုမ္မဏီကြီးတစ်ခုမှာ အနည်းဆုံးဝန်ထမ်းက ထောင်ကျော်ရှိတယ်။ ဒါ့အပြင် ဌာနတွေလည်းအတော်များတယ်။ အိုင်တီဌာကစလို့ဂျီအိုလော်ဂျီအထိ ဌာနတွေရှိတော့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းတယ်။ တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ မရသေးခင်မှာ အလုပ်သင်အနေနဲ့ မိုင်းမှာ လာပြီးလုပ်ကြတယ်။ တော်တဲ့ကျောင်းသား အလုပ်ကျိူးစားတဲ့ကျောင်းသားဆိုရင် တစ်ခါတည်း အလုပ်ခန့် တော့ ကျောင်းသားတွေ အလုပ်ပါရပါတယ်။ ဒီလိုအခွင့်အလမ်းမျိူးကို ကုမ္မဏီက တစ်နှစ်မှာ အယောက်ငါးဆယ်လောက် တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ ချိတ်ထားပြီး အခွင့်အလမ်းပေးတော့ မြန်မာပြည်မှာလို ဘွဲ့ ရအလုပ်လက်မဲ့တွေမရှိနိုင်တော့ဘူး။ အလုပ်မရရင်တောင် အလုပ်အတွေ့ အကြုံနဲ့ ဘွဲ့ ရှိတော့ အခြားကုမ္မဏီတွေမှာ အလုပ်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါမျိူးကို မြန်မာပြည်က ကုမ္မဏီတွေ လုပ်ကြစေချင်တယ်။
နောက်တစ်ခုက ပညာတော်သင်လွတ်တဲ့ကိစ္စပါ။ ကုမ္မဏီကနေ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေက ကုမ္မဏီတွေ နဲ့ဝန်ထမ်းချင်းလဲလှယ်တဲ့ အစီအစဉ်လုပ်ပေးတယ်။ ဥပမာ ကျနော်တို့ ဌာနက ဂျီသြလောဂျစ်တွေ ဖင်လန် ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ တောင်အာဖရိနိုင်ငံက မိုင်းတွေမှာ သွားပြီး အလုပ်အတွေ့ အကြုံယူရတယ်။ သူတို့ ဆီက ဝန်ထမ်းလည်း သြစတျေးလျက ကျနော်တို့ မိုင်းမှာလာပြီး လေ့လာတယ်။ ဒါမှ ပညာချင်းဖလှယ်နိုင်မှာပါ။ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အရည်အသွေးလည်း အမြဲတိုးတက်နေတယ်။ တနှစ်မှာလေးငါးခြောက်လတစ်ခါ သင်တန်းတက်ရတယ်။ ပညာနဲ့ ပေါ်လစီဆိုတာက အမြဲတမ်း အသစ်ဖြစ်လေ့ရှိတော့ ဒါတွေကို အမှီလိုက်ဖို့က သင်တန်းလိုတယ်။ ဒီလိုမှ မတက်ရင် ဝန်ထမ်းအရည်အသွေးက ညံ့သထက်ညံ့လာပြီး ကုမ္မဏီလည်း ဒေဝါလီခံရမှာကို အရာရှိကြီးတွေသိတော့ လုပ်ပေးပါတယ်။
ပီရှုးနိုင်ငံမှာ ဒေသခံတွေရောင်းတဲ့ ဆန်ဆီးဆား ငရုတ်ကြက်သွန်ကစလို့ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေကိုလည်း ကျနော်တို့ ပေါ်လစီအရ ဝယ်ရတော့ ရွာက စီးပွားရေးကောင်းလာတယ်။ အဲဒိဒေသက အင်မတန်ခေါင်တဲ့အပြင် အစိုးရကလည်း လက်လှမ်းမမှီဘူး။ ဒီတော့ ကုမ္မဏီက ကျောင်းတွေဖွင့်တယ်။ ဆေးပေးခန်းတွေဆောက်တယ်။ ဆေးရုံတွေဆောက်ပေးတယ်။ ကုန်ကုန်ပြောရင် သူနာပြုတွေကအစ ဆေးမှုးတွေအဆုံး ကုမ္မဏီကနေ ငွေကုန်ပြီး သင်တန်းပေးတယ်။ သင်တန်းဆင်းတွေက သူတို့ ရွာတွေမှာ ပြန်လုပ်ကြတော့ အကျိူးရှိပြန်တယ်။
မိုင်းစဖွင့်တုန်းက ဒေသခံတွေက ကုမ္မဏီကို အရမ်းဆန့် ကျင်တယ်။ အခုတော့ သူတို့ ဆန့် ကျင်ဖို့နေနေသာသာ ကုမ္မဏီက အဲဒိဒေသကနေထွက်မှာကို အရမ်းကြောက်နေပြီ။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ စီးပွားဖြစ်နေပြီဆိုတော့ ကုမ္မဏီမှ မရှိရင် ဒုက္ခဖြစ်တော့မှာကို ကြိုသိတယ်။
ရွှေမိုင်းက ရေကို အရမ်းသုံးရတယ်။ ရေနဲ့ ဆင်နိုက်လို့ ခေါ်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်းကို ရောစပ်ပြီးမှ ရွှေကိုကျောက်သားကနေ ထုတ်ယူလို့ ရတယ်။ အင်မတန်ကြီးတဲ့မိုင်းတင်မဟုတ်ဘူး လက်နဲ့ တူးတဲ့လူတွေလည်း ဒါကိုပဲသုံးရတယ်လို့ ထင်တယ်။ မြစ်ချောင်းတွေမှာရွှေကျင်တော့ အဲဒိ ဆင်နိုက်အရည်က ချောင်းထဲစီးဝင်တယ်။ ဒါကို လူနဲ့ ငါးကသောက်တော့ ရောဂါရရော။ အပင်လည်း အဆိပ်သင့်တယ်။ ရွှေအောင်စ သန်းနဲ့ ချီပြီးထုတ်တဲ့ ကုမ္မဏီဟာဒီကိစ္စကို သေသေချာချာ ကိုင်တွယ်ရတယ်။ တစ်ချက်ကလေးလွဲတာနဲ့ ဘေးနားက ရွာတွေ ဒုက္ခဖြစ်ရောပဲ။
ပီရှုးမှာ ရွှေမိုင်းစဖွင့်တော့ ရွာတွေက သူတို့ ချောင်းတွေ ညစ်ပတ်ကုန်ပြီဆိုပြီဆင်ခြေပေးတယ်။ ကန့် ကွက်တယ်။ နောက်ဆုံး ကျနော်တို့ ကဘယ်လို စဉ်းစားရလဲဆိုတော့ Open Transpency ကို ကျင့်သုံးလာရတယ်။ သူတို့ ယုံအောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းက အားလုံးပွင့်လင်းမှ ရမယ်။ ဒါနဲ့ မင်းတို့ ရွာတွေက ကိုယ်စားလှယ်ရွေး။ ပြီးရင် အဲဒိလူတွေနဲ့ ရေသန့် ရှင်းရေးကို ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ တွဲပေးပြီး မြစ်ချောင်းတွေမှာ ရေစစ်တမ်း ကောက်တယ်။ ခြောက်လ တစ်ခါကောက်တယ်။ ခေတ်မှီစက်တွေနဲ့ စစ်တယ်။ ဒါတင်မဟုတ်သေးဘူး။ Exernal Audit လိုခေါ်တဲ့ အပြင်က အစိုးရအသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရ ရေအရည်အသွေးကို စစ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက ခြောက်လတစ်ခါပုံမှန်ပြန်စစ်တယ်။ ရလာတဲ့ ရလာဒ်ကို လူထုကို အသိပေးတယ်။ တကယ်လို့ ရေမသန့် တာတွေ့ ရင် မိုင်းကို ပြန်ပြီ ဒိထက်ကောင်းတဲ့စီမံခန့် ခွဲမှု့ နဲ့ စိစစ်ပြန်တယ်။ နောက်ဆုံး လူထုကလည်း လက်ခံလာတယ်။ သူတို့ ထင်တာတွေ မှားနေတယ်လို့ ပြောတယ်။
တချိူ့ သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေက ပထမဆုံးသူတို့ အထင် ချောင်းတွေမြစ်တွေက ညစ်ညမ်းနေပြီဆိုပြီးကန်ပိန်းလုပ်ထားတာကို ပြန်ရုပ်သိမ်းတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Company တိုင်း Open Transpency က အောင်မြင်ရေးအတွက် အင်မတန်ကို အရေးကြီးတယ်။
ရွှေကျင်ဖို့ အတွက် မိုင်းထဲမှာ တွင်းအကြီးကြီးကိုတူးရတယ်။ မိုင်းက ညစ်ညမ်းရေတွေကို အဲဒိတွင်းထဲကို စွန့် ထုတ်တယ်။ တွင်းအောက်မှာ ရေမစိမ့်နိုင်တဲ့ တာလပတ်ကို ခံထားတော့ ညစ်ညမ်းရေက မြေအောက်ရေအထိ စိမ့်မဝင်နိုင်ဘူး။ ပြီးတော့ ရေကို Recycling လုပ်တယ်။ ပိုတဲ့ရေကို ဘေးနားက ရွာတွေမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးနိုင်အောင် ဖြန့် ဖြူးပေးတယ်။ ဒီလိုပုံစံနဲ့ ဆင်နိုက်အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ပေးထားတော့ မြစ်ချောင်းတွေထဲအထိ ရေညစ်တွေက မရောက်တော့ဘူး။
နောက်တစ်ခုက မည်သည့်မိုင်းမဆို စက်ယန္တယားတွေနဲ့ တူးတော့ ဆီချေးအလေအလွင့်တွေက မြေပေါ်ကိုကျတယ်။ ဒီဟာတွေကို Hydrocarbon လို့ ခေါ်တယ်။ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်နဲ့ အင်ဂျင်ဝိုင်တွေကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒီလိုမဖြစ်အောင် ဝန်ထမ်းတိုင်းကို သင်တမ်းပေးတယ်။ ဒါကို SpillsTraining လို့ ခေါ်တယ်။ ပြီးတော့ အထောက်အကူပစ္စည်းတွေကို ပံ့ပိုပေးတယ်။ ဥပမာ အင်ဂျင်ဝိုင်က မြေပေါ်ကိုကျလာရင် စုပ်ထုတ်တဲ့ ဖော့ပြားတွေကို အရံသင့်ထားပေးထားတယ်။ ဆီဂျေးတွေက မြေပေါ်ကို ကျရင် မြေအောက်ရေထဲအထိ စိမ့်ဝင်နိုင်တယ်။ လူတွေက ဒီရေကိုသောက်မိရင် ရောဂါရတယ်။ မိုင်းတိုင်းမှာ ဒီကိစ္စက အန္တရာယ်အကြီးဆုံးပဲ။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ကားတွေက အများကြီးကိုး။ ဒါကိုမှ စီမံခန့် ခွဲမှုကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ရင် မည်သည့် သယံဇာတမှ မရှာတာအကောင်းဆုံးပဲ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တွေ့ နေရတဲ့ မိုင်းတွေအားလုံးလိုလိုက ကျနော်လုပ်နေတဲ့ ကုမ္မဏီနဲ့ ဆို၊ ဆီနဲ့ ရေလို အင်မတန်ကွာပါတယ်။ နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ အင်အားတွေဖြည့်ဖို့ လိုနေတယ်။
Multi-National Comapny ကြီးတွေက သူတို့ ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ (Good Reputation) ကို အထိမခံတဲ့အတွက် သူတို့ တွေဟာ စနစ်တကျလုပ်ပါတယ်။
ကျနော်အနေနဲ့ ဘာ့ကြောင့် ကျနော်လုပ်နေတဲ့ကုမ္မဏီကို မြန်မာပြည်ထဲမှာ သွင်းချင်လဲဆိုတော့ သူတို့ က စံပြ (Role Model) ဖြစ်လာပြီး အခြားကုမ္မဏီတွေလည်း အတုခိုးလာမယ်လို့လုံးဝယုံကြည်လိုပါ။ အစိုးရရဲ့စီမံခန့် ခွဲမှုကတော့ တပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္မဏီတွေကလည်း တဖက်တစ်လမ်းကနေ လူထုအတွက် တာဝန်ယူရတယ်။ ကူညီရတယ်။ ဒါကို Duty of Care လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမြတ်ငွေလည်းယူကြပါ။ ကူလည်း ကူညီကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
၂၁၊ ၇၊ ၁၂
ရေးသားသူ - ---- at Saturday, July 21, 2012
ဒီလိုရှိတယ်... စောက်ကုလားရဲ့ 
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Wednesday, July 18, 2012
အာဇာနည်နေ့ ကို အသိအမှတ်မပြု
အာဇာနည်နေ့ ဆိုတာ အခြားသော လုပ်ကြံခံရတဲ့အထဲမှာ မပါတဲ့လူတွေအတွက်တော့ မတရားပါဘူး။ တော်လှန်ရေးမှာ ပါတဲ့ခေါင်းဆောင်ကစပြီး ထမင်းချက်ပေးတဲ့ ရွာသားတွေလည်း အာဇာနည်ဖြစ်ထိုက်တယ်လို့ ကျနော် ယုံကြည်တယ်။ အခုတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ လုပ်ကြံခံရလို့ သေသွားတဲ့လူတွေအတွက်ပဲဆိုတော့ အာဇာနည်နေ့ ဟာ လုံးဝကို အဓိပါယ်မဲ့နေတယ်။ ဦးနေ၀င်းတောင် အာဇာနည်စာရင်းထဲမှာ ပါသင့်တယ်လို့ မြင်တယ်။
ရေးသားသူ - ---- at Wednesday, July 18, 2012
ကမ္ဘာပေါ်မှာ တတိယအကြီးဆုံး ရွှေတူးတဲ့ Company ဖြစ်တဲ့ တောင်အာဖရိက အခြေစိုက် Goldfields Company က စီအီးအိုနဲ့ ကျနော် နောက်လထဲမှာ သြစတျေလျးနိုင်ငံမှာတွေ့ ဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်။
သူကို့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အပြောင်းအလဲအခြေအနေကို အကြမ်ဖျင်းတင်ပြမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ဖို့ သတင်းအချက်အလတ်တွေဖလှယ်ပေးရမယ်။ စီအီးအိုအနေနဲ့ ကျနော်အကြံပေးတာကို သူကစိတ်ဝင်တစားရှိလို့ ကျနော်နဲ့ တွေ့ တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမှ ကျနော်သူ့ ကို အကြံပေးခဲ့တယ်။ ဒါကတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်မှာ ရွှေရှာဖွေရေးလုပ်မယ်။
သူသိချင်တာက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရွှေကြောအခြေအနေကို သိချင်တယ်။ နိုင်ငံရေးစနစ်၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု့ ဥပဒေစတဲ့ အခြေအနေတွေကို သူတို့ စတင်လေ့လာနေပါပြီ။
တလောက မြန်မာပြည်မှာ ဆက်တလိုက်အကူအညီနဲ့ တွေ့ တဲ့ ရွှေကြောကို ကျနော်တင်ပြဖို့ ရှိတယ်။ဒါကလည်း အတိအကျဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ ထင်တယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် ရွှေထွက်နိုင်တဲ့ ဒေသတွေကို သိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ ကျနော့်ဆီကို ဆက်သွယ်စေချင်ပါတယ်။ နောက်လထဲမှာ စီအီးအိုနဲ့ တွေ့ ရင် တင်ပြဖို့ ပါ။
ကျနော်က သူ့ ရဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်တာရယ် လက်ရှိ သြစတျေးလျက ရွှေထုတ်လုပ်တဲ့ သူ့Company မှာ လုပ်နေတာဆိုတော့ သူ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူက ကျနော့်ကို ရသလောက်အချက်အလက်တွေစုပြီး သူ့ ဆီကို တင်ပြပါလို့ ညွန်ကြားလာတဲ့အတွက် အားလုံးကို အသိပေးတာပါ။
တကယ်လို့Goldfields အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုသာ ၀င်လာရင် အလုပ်အကိုင်အပြင်နည်းပညာတွေပါ ပါလာပါလိ့မ်မယ်။ နောက်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို စီမံခန့် ခွဲပုံစပြီး မြန်မာပြည်မှာ မရှိသေးတဲ့ မိုင်းတူနည်းပညာကိုပါ တင်သွင်းလာပါလိ့မ်မယ်။ အရမ်းစနစ်ကျတဲ့ Company တစ်ခုပါ။ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်အနေနဲ့ အကျိူးကျေးဇူးတွေအများကြီးရနိုင်တယ်။
သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ ရွှေကြောအခြေအနေကို နိုင်ငံတကာသိအောင် အင်တာနက်မှာ တင်ပြပေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အခုပုံစံက သြစတျေးလျကမိုင်း Company တွေဝင်ဖို့ ဆိုရင် အချက်အလက်တွေကို ဘယ်မှာလိုက်ရှာမှန်းတောင်မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။
သူတို့ တွေ မြန်မာပြည်မှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ အရမ်းစိတ်ဝင်စားနေပါပြီ။
ရေးသားသူ - ---- at Saturday, July 14, 2012
ဒီနေ့၁၂-နာရီခရီးကို ကားမောင်းနေရင်း လမ်းတ၀က်ရောက်တော့ အီးမေးတစ်စောင်ဝင်လာတယ်။ ကိုရွှေသွေးသေပြီတဲ့။ အရမ်းကို ထိန့် လန့် သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်ထင်တာက သူ နေမကောင်းဘူးထင်နေတယ်။ အခုလို ဖြစ်သွားမယ်လို့ လုံးဝကို မထင်ခဲ့ဘူး။
သူ မိန်းမခိုးပြေးတော့ ထမိန်ထုတ်ကို ကျနော်ထမ်းရတယ်။ ဒါကို သူဘယ်တော့မှ မမေ့ခဲ့ပါဘူး။
အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ အမြန်ကြွေစောတာကိုတော့ အရမ်းနှမျောတယ်။ သူလုပ်နိုင်တာတွေအများကြီးပဲ။
ကျနော်တို့၈၈ မျိူးဆက်တွေဟာ အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ သေကြတာ များတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အထွန်းလို့ ခေါ်တဲ့ ကိုရွှေသွေးမိန်းမနဲ့ ရင်သွေးတွေကို ကျနော်တို့ မသေခင်အထိ ကြည့်ရှု့ ကူညီပေးပါ့မယ်။
မြန်မာပြည်ကို မပြန်နိုင်ပဲ နိုင်ငံခြားမှာ သေသွားတော့လည်း တမျိူးတော့လှည့်ပြီးတွေးလို့ ရတယ်။ ဒါကတော့ အခေါင်းလှတာပေါ့ဗျာ။ နိုင်ငံခြားက အခေါင်းက အရမ်းအဆင့်မြင့်သလို မသာပို့ ရင်လည်း မာစီဒီးကားအနက်ကြီးနဲ့ ဆိုတော့...ကိုရွှေသွေး ကျေနပ်မှာပါ။
မြန်မာပြည်မှာသေလို့ ကတော့ သစ်သားခေါင်းနဲ့ မဟုတ်တာတောင် ဖျာလိပ်နဲ့ ဆိုတော့...အလောင်းမလှဘူးပေါ့ ကိုရွှေသွေး။
အခုတော့ နော်ဝေမြေပေါ်မှာ နေခဲ့ပါ။ မပြီးသေးတဲ့တိုက်ပွဲကို ကျနော်တို့ ဆက်တိုက်ပါ့မယ်။ နောင်ဘ၀မှာ ဘုန်းကျော်နဲ့ တွေ့ ရင်လည်း ထမိန်ထုတ်တော့ မထမ်းခိုင်းနဲ့ ပေါ့ဗျာ။
ရေးသားသူ - ---- at Friday, July 13, 2012
ကိုရင်မောင် (ဘီဘီစီ) နဲ့ ကိုချိူ........
ကိုရင်မောင် (ဘီဘီစီ) နဲ့ ကိုချိူ.........Wed ည လွတ်လပ်အတွေးဆွေးနွေးဖလှယ်ပွဲကု
ိ နားထောင်ရတယ်။ မဆုမွန်ရဲ့ ဖဘကနေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်ဆဲတယ်။ အင်တာနက်မှာဆဲတယ်။ ဖဘမှာဆဲသလို ကိုယ်ပိုင်ဘလောဂ့်မှာလည်းဆဲတယ်။ ဘယ်ကောင်တွေ ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကို မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းတင်ပြတယ်။ ဒါကို ခင်ဗျားတို့ လည်းသိသလို အားလုံးသော လူတွေလည်းသိတယ်။
ဘုန်းကျော်သည် ဘယ်တော့ မှလူကြီးကို မဆဲပါဘူး။ မိုက်ရိုင်းဖို့ ဆိုတာဝေးလားဝေးပါ။
တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ ဒီလို ကျနော်လုပ်လို့ ကြိုက်တဲ့ဥပဒေနဲ့ ဖမ်း၊ ကြိုက်တဲ့ရဲ ကျနော့်အိမ်ကို လာခဲ့။ အဖမ်းခံဖို့ အဆင့်သင့်ပဲ။ သြစီမှာနေတာပါ။ ပြီးရင် နှစ်ဖက်လုံး တရားရုံးမှာရှင်းမယ်။ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်လို့ ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ လိမ်ပြောတာမဟုတ်သလဲ ထွင်ပြီးပြောနေတာလဲ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ဘီဘီစီကလူတွေအားလုံးသိမယ်လို့ ယူဆတယ်။
ကိုကိုကြီးပြောတာကို ထောက်ခံတယ်။ ကျနော်ရေးတာကိုမကြိုက်ရင် ဖတ်တဲ့သူနည်းလိမ့်မယ်။ သူတို့ က ကိုယ့်ကိုယ်ဒဏ်ခတ်မှာပဲ။ ဒါပဲ။
လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံမှာ ဘယ်တော့မှ ဆင်ဆာမရှိသလို မကြိုက်ရင် နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုတောင်ဆဲလို့ ရတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိတယ်။ သိသိကြီးနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအလွဲသုံးစားမလုပ်ပါနဲ့ ။မကြိုက်ဘူး။ လုပ်လာရင် ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ခင်ဗျားတို့ကျနော့်အကြောင်းသိတော့ များများတော့မပြောတော့ပါဘူး။
ဒီလောက်ပါပဲ။ အဲဒိညက ဆွေးနွေးတဲ့လွတ်လပ်အတွေးက ကျနော့်ကို ဦးတည်တာလို့ ကျနော်ထင်တယ်။
ရေးသားသူ - ---- at Thursday, July 12, 2012
သုံးလကို ရွှေအောင်စ ငါးသောင်းထုတ်ရမယ်။
တစ်အောင်စပေါက်ဈေးက ဒေါ်လာ ၁၆ဝဝ နီးပါးရှိတယ်။
ကုန်ကျစရိတ်က တစ်အောင်စကို ရှစ်ရာလောက်ကျတယ်။ ဆိုတော့ အမြတ်က ရှစ်ရာရတယ်။ ရွှေအောင်စ ငါးသောင်းကို ရှစ်ရာနဲ့ မျှောက်ကြည့်ပါ။
ငါးသောင်းထက်ကျော်ရင် ဘိုးနပ်စ်ရမယ်။ နည်းရင် မရဘူး။ အရင်သုံးလကလည်း မရဘူး။ ဒီလလည်း မရဘူး။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ငါးသောင်းထက် ပိုနည်းလို့ ပါ။ မြေအောက်မှာ လူသုံးယောက်ဒါဏ်ရာရတယ်။ ရွှေကျိူတဲ့ ဌာနက လူတစ်ယောက် ဘီဒိုပိတာ ခြေထောက်ကျိူးတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုတော့ ဒီသုံးလအတွင်းမရှိဘူး။
အပြောင်းအလဲလုပ်စရာရှိတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေထွက်တာများတယ်။ ဒါတွေကို ပြန်ပြီစီမံခန့် ခွဲရမယ်။
ဒီသုံးလအတွင်းမှာ ရွှေထွက်နည်းလို့ တောင်အာဖရိကမှာနေတဲ့စီအီးအိုက ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုပြီးမေးတယ်။ ရွှေထွက်နည်းတာ ခြောက်လတောင်ရှိပြီ။ ကုန်ဈေးနည်းနဲ့ ရွှေပါဝင်နှုံးကြောင့် နည်းနည်းတော်သေးတယ်။ နောက်သုံးလအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။
ဒါကတော့ ယနေ့ အစည်းအဝေးမှာ မိုင်းမန်နေဂျာပြောတဲ့ စကားပါ။
စကားမစပ်.....မြန်မာအစိုးရက လိမ်လည်စားတဲ့လူတွေကြတော့ ဗီဇာပေးတယ်။ ကျနော့်လို ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်ရှာစားတဲ့လူတွေကျတော့ တွန့် တိုနေတယ်။ ငါ-ိုးမသားအစိုးရ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Thursday, July 12, 2012
ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေ ပြည်ပကနေ ပြန်လာဖို့ အတွက် ဗီဇာပေးတာတောင် တွန့် တိုနေတယ်။ ငါလိုးမသား အစိုးရ။ လီးပဲ။
ရေးသားသူ - ---- at Wednesday, July 11, 2012
ဒီနေ့ မှာ ကျနော်လုပ်တဲ့ မိုင်းအလုပ်ထဲကို သြစတျေးလျအလုပ်သမား သမဂအဖွဲ့ လာပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေရဲ့ နစ်နာချက် ခံစားချက်နဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတွေကို သမဂ ကိုယ်စားလှယ်တွေက လာရောက်နားထောင်တာပါ။
ဒီလိုလာနိုင်ဖို့ အတွက် အလုပ်ကလည်း ခွင့်ပြုချက်ပေးရသလို နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ အစည်းအဝေးခန်းမလည်း စီစဉ်ပေးရတယ်။
အလုပ်ရှင်ကလည်း ငြင်းပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ အစိုးရက အလုပ်သမားတွေအတွက်ရေးဆွဲထားထားတဲ့ ဥပေဒထဲမှာ ဒီလိုမျိူးစီစဉ်ပေးရမယ်လို့ ပြဌာန်းထားပါတယ်။ ဒီလို ဥပမာကို လက်ရှိမြန်မာပြည်ထဲက အလုပ်သမားအရေးကျိူးပမ်းနေတဲ့ လူတွေ သိပါစေ။ဒါမှ အလုပ်သမားတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို လုပ်ငန်းခွင်ထဲအထိ သွားရောက်နားထောင်နိုင်မှာပါ။ အခုတော့ လမ်းဘေးမှာ အော်ဟစ်တောင်းဆိုတာတွေကတော့ အဆင့်အတန်းမရှိဘူးလို့ ပဲပြောရမှာပဲ။
အလုပ်ရှင်ကော အလုပ်သမားကော ဒီလိုလုပ်လို့ ဘယ်တော့နစ်နာမှုမရှိကြောင်းကို သြစတျေနိုင်ငံက သက်သေပြနေတယ်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Friday, July 06, 2012
တောထဲမှာနေတာ့ အရက်က ဈေးအရမ်းကြီးလို့ အွန်လိုင်းကနေ ဖာလိုက် ၀ယ်ပြီးသောက်ရပါတယ်။ Dan Murphy ဆိုတဲ့အရက်ဆိုင်ပါ။ သူက အွန်လိုင်းကနေလည်း ၀ယ်လို့ ရတဲ့ အရက်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ မသိသေးဘူးများ သိအောင်ရှယ်ပေးတာပါဗျာ။ ဘာရယ်လို့ မဟုတ်ပါ။
၀ယ်ချင်ရင် ဒိလင့်ကိုသွားပါ။ ဆိုင်တွေထက်အင်မတန်ဈေးသက်သာပါတယ်။
ရေးသားသူ - ---- at Wednesday, July 04, 2012
နောက်ဆုံးထုတ် ဗီးနပ်စ်ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြခံရသော ဆောင်...